Vanotsvakurudza veAmazon vanogona sei kubatsira bhizimisi rangu kugadzirisa?
Wati wamboshamisika nei iwe uchida kutungamirira Amazon mutengesi kutsvakurudza? Iyo inobatsira Amazon inoshanda vakawanda vedu vasingazivi nezvazvo. Muzvokwadi, tsvakurudzo yeAnger muzvitengesi inogona kubatsira kune vatengi nevatengesi. Muchidimbu ichi, tichakurukura simba rekutsvakurudza kweAngoni uye kutarisa zvakanyanya matanho anokosha ekugadzirisa anogona kukubatsira kuti uwedzere kutengesa kwako uye kusimudza mararamiro ako.
Nzira yekuitisa sei kuongorora Amazon mutengesi?
Hazvina basa kuti ndezvipi zvinhu zvaungada kuronga; iwe une chokwadi kuti urikuwana pakati pezvinenge zvisingagumi zvigadzirwa zvemabhuku pa Amazon inoshandiswa nzvimbo - how to set up home networking. Pano iwe haugoni kuona zvigadzirwa zvinotengeswa uye zvakazadzikiswa nevatengesi asiwo akawanda akawanda anopiwa nevanopfuura mamiriyoni maviri vatatu vatengesi. Kushandisa Amazon search mune ramangwana, unogona kutungamira Amazon mutengesi kutsvakurudza uye kuwana avo vatengesi mumwe nomumwe nenzira imwecheteyo sezvaunowana chero zvinhu zviri pawebsite. Uyezve, iwe unogona kutarisa madhipatimendi ayo maitengesi emutengesi anotengeswa uye ona mutengesi waunoda pane rumwe rutivi rworuboshwe chikamu.
tsvakurudzo yeAmazon yakanyatsorongedzerwa kuderedza kutsvaga kwako nekushandisa zvakasiyana siyana zvakasiyana-siyana uye mimwe mibvunzo. Inosanganisira mazita emagetsi, mavara, uye mazita emabhizimisi. Kana iwe uchida kubatanidzwa nevatengesi, unoda kutsvaga kambani yekambani iyo inofanira kuiswa pamusoro pekutsvaga kwekutsvaga uye inogona kudonhedzwa kupinda muchikwata chechikwata. Kuti uwane mumwe mutengesi, unofanirwa kusarudza chimwe chezvinhu zvakarongwa uye wozonyora zita revatengesi mukati mechigadzirwa ichocho kuti udzoserwe kune peji rebhizimisi.
Zvakare, Amazon inopa mazita ezvinyorwa zvinyorwa zvevashambadziri mubazi rimwe nerimwe. Pano unogona kuwana pfungwa yakawanda yezita romutengesi. Kuti uwane rwandu rwevatengesi, unofanirwa kuvhara pa "shop nedhipatimendi" basa. Inogara pakona yepamusoro yekona yemapeji ose emagetsi uye mapeji emakadhi. Kuti uwane migumisiro yakajeka, iwe unofanidza kupedza mubvunzo wako.
Amazon saleser research research
Customer URL queries
Wati wambobvunza here kuti Amazon inoshandisa sei mibvunzo ye URL mitsva yekutsvaga uye kuti ungabatsirwa sei nayo? Amazon ma URL anogona kukukanganisa zvakanyanya kuverenga kwako nekunyatsoronga maitiro kana iwe uchivashandisa zvakanaka.
Amazon URL ine zvinyorwa zvinotevera - & field-keywords = rambo rwemashoko ekutsvaga shandiso inoshandiswa kufanana nemhinduro yomudhi nemutsva wekutsvaga. Chikamu chekutanga chema URL imwe neimwe yeAmerica inoratidzika se "/ s / url = search-alias" uye inoshandira kubudisa migumisiro nevanotengesa zvikuru.
Ndicho chikonzero chekusimudzira peji rako uye kuunza iyo yakakwirira; iwe unofanira kubvisa URL pasi ichi:
https://www.amazon.com/s/?url=search-alias&field-keywords="a chinyorwa chemashoko ako. "
Kana ukanyora pane chigadzirwa kubva peji rekutsvaga, unogonawo kuona URL yakareba uye kwete yakajeka. Inogonawo kugadziriswa kukuunza iwe yakakwirira. Iwe unofanirwa kuisa mazita ako ezvinyorwa mu URL kuitira kuti michina yako ionekwe paSERP. Iwe unogona kuedza kuongorora humwe hutano hwakakonzerwa neIndaneti hunobudisa peji yaunoda kuona.
Chinhu chinokosha chandinofanira kutaura ndechokuti unoda kushandisa "& 20" unhu panzvimbo ye "+" unhu kuti uparadzanise mashoko ekutsvaga mu Amazon URL.